Chii chinonzi IPO? | Ehupfumi Zvemari
Kana iwe uri muzvinashawo ane ruzivo rwakati, iwe uchave zvirokwazvo wakasangana nechidimbu IPO pane kanopfuura kamwe chiitiko. Huye, iwo ndeavo anoenderana neruzhinji kupa kupihwa kwekutengesa uye kuti iwo akateedzana mashandiro anoitwa kana muridzi we hombe vhoriyamu yezvikamu yekambani inoda kutengesa iyo yekugovana pasuru. Kana kufamba uku mumisika yezvemari kuchizivikanwa nechimwe chinhu, imhaka yekuti vanofamba nevhoriyamu yemasheya pamusoro peyakajairwa uye kuti saka kutengesa kunoitwa zvakarongeka, asi pane izvo zvinodzorwa. Izvi ndizvo zvinopihwa neruzhinji kutengeswa.
Kunyangwe IPOs inogona kukanganisa makambani asina kunyorwa mumisika yemari, zvatichaita ndeavo akanyorwa pamusika wemasheya. Uye icho chingave chiri chinhu cheako mashandiro pamusika wemasheya kuti uwane purofiti iyo yaunoshuvira kuisa mari kubva zvino zvichienda mberi. Mupfungwa iyi, iwe unofanirwa kuyeuka izvo muIPOs vazhinji vanozogovana chikamu vanodonhedza chikamu kana chese chikamu chepakeji izvo zvaakange anazvo, uye zvinoita kuti zviwanikwe kune mudiki nepakati investor. Ndipo apo iwe pachezvako unoita basa rakakosha kuti uongorore kuti zviri nyore kwauri here kana kuti kwete kunyorera aya akakosha mashandiro.
Izvo zvakare zvinobatsira kwazvo kuziva kuti rudzi urwu rwekupihwa neruzhinji runofanirwa kuita renzvimbo yeruzivo bhurocha mune izvo zvambotaurwa zvinotsanangurwa. Mune iyo data rese rinofanirwa kubvunzwa nevamhan'ari veaya mashandiro pamusika wemasheya rinoratidzwa. Semuenzaniso, nhamba yezvikamu zvakapihwa, mazwi, kupera kwekushanda, kodzero dzekunyora uye chero rumwe ruzivo rwunonyanya kudikanwa kune vanoita mari. Neiyi nzira chete ndipo pauchakwanisa kutarisa kana iwe uri muchinzvimbo chekunyorera kune yeruzhinji kupihwa kwekutengesa kuri kuitwa nguva dzese.
1 IPO: chinhu chinowanzoitika pamusika wemari
2 Maitiro ekunyora pasi IPO
3 Kukosha kwezvikamu izvi
4 Kukosha kwemusika: kuvimbika zvakanyanya
5 Inoda IPOs kunyorera?
IPO: chinhu chinowanzoitika pamusika wemari
Ehe, zveruzhinji zvinopihwa zvekutengesa hazvisi zvakajairika kufamba mumisika yequity. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe uchavawana kazhinji kazhinji mumakore ese. Kusvika padanho rekuti kune vakawanda varimari vanoziva kwazvo nezvechitarisiko chavo kuyedza tora mabhenefiti akafara mune izvi mashandiro pamisika yemasheya. Asi chenjera kwazvo, nekuti hazvisi zvese zvinopihwa neruzhinji zvekutengesa zvinofanirwa kuve zvinobatsira. Ehezve, iyi haisi iyo mamiriro uye usakahadzika kuti dzimwe nguva mabasa anokuvadza anogona kuitwa kudzivirira zvido zvako sevatengesi vevatengesi.
Kubva pane ino mamiriro ese, mune yekutanga nzvimbo iwe unofanirwa kufunga kuti kupi kuburitswa kweumwe neumwe weveruzhinji zvinopihwa zvekutengesa zviri. Nekuti havasi vese vakaenzana, kure nazvo, asi zvinodzorwa nehunhu hwakasiyana zvakanyanya kubva kune mumwe. Ichi ndicho chimwe chezvinangwa zveIPO zvauchasarudza kubva panguva dzino chaidzo. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Iko kushushikana mumasarudzo ako kunofanirwa kuve imwe yemakiyi akakosha kuti iwe ubudirire mune urwu rudzi rwekushanda mumisika yemari.
Maitiro ekunyora pasi IPO
Chichava chimwe chezvikamu zvakakosha zvevashambadzi vadiki nepakati. Izvi zvinokonzerwa nechikonzero chinogombedzera chinogara mukuti pane dzimwe nguva huwandu hwezvikumbiro hunogona kupfuura huwandu hwese hwechengetedzo dzakapihwa. Eya, mune izvi zviitiko zveveruzhinji zvinopihwa zvekutengesa, hakuzove nesarudzo kunze kwekugovera zvikamu mukati mezvikumbiro zvakaitika munguva iyi. Izvi zvinoita kuda kwako kunogona kusazogutsikana nezviito zvaunoda tora zvikamu kuburikidza neIPO iri mubvunzo. Kubva pane ino maonero, inogona kunge iri nzira inokuvadza zvakanyanya kune zvaunofarira nekuti uchafanirwa kuiswa pasi pechiitiko chezviito kuti uite basa iri.
Kune rimwe divi, kune imwezve mamiriro ayo akasiyana zvakanyanya, zvirinani maererano nezvinangwa zvaunoteedzera mune zveveruzhinji zvinopihwa zvekutengesa. Nekuti zvirizvo, zviri pachena kuti izvo zvikumbiro usasvike huwandu hwetsika dzakapihwa. Zvakanaka, mune ino mamiriro, ayo anogona kuitika nehumwe huwandu, kudiwa kuchasangana zvine chekuita nemasheya iwe aunoda kuwana kuburikidza neiyi yakasarudzika zano mumisika yequity. Nekusiyana kwega kwekuti zvimwe zvese zvikumbiro zvichazopedzisira zvaenda kune weinishuwarenzi wezvemari. Neiyi nzira, hazvizokanganisa zvaunofarira zvakanyanya seizvo zveimwe chikamu cheichi chiitiko.
Kukosha kwezvikamu izvi
Chimwe chinhu chakasiyana kwazvo kumisikidza chii chiri iyo kukosha yezvikamu zviri pamusika wemasheya zvinoshanduka kuburikidza neruzhinji kupa kwekutengesa. Nekuti izvi zvakati omei kupfuura zvikamu zvakapfuura, sezvo uchakwanisa kuona kubva zvino zvichienda mberi. Nei misiyano yakawanda inoitika kuumba iyo chaiyo kukosha kwezvikamu zvechengetedzo zvinopinda nenzira iyi yebhizinesi. Kufanana neinotevera iyo yatinokufumura pazasi panguva ino.
Zita kukosha: Ehe, ndiyo yakajairika odes uye ndiwo mhedzisiro yekugovanisa capital stock neuwandu hwese hwezvikamu. Anenge zvese masheya mumusika unoenderera wepamusika unoshandisa ichi chiratidzo kuti uone kukosha kwazvo mumisika yemari.
Kukosha kwebhuku: ndiyo yakasarudzika sisitimu yekusvika pakukosheswa kwayo nekuvimbika kukuru, kunyangwe ichipa mamwe matambudziko anozogadziriswa mune zvimwe zvinyorwa. Nekuti zvirizvo, kukosha uku kunogona kuwanikwa kubva mukuita kuri nyore sekuwana mutsauko pakati pezvinhu nezvikwereti, kuigovanisa nenhamba yezvikamu kubva zvino zvichienda mberi. Kune rimwe divi, iyo iri nyore nzira iri mukati mekusvikira kwekunzwisisa kwechero ipi yevatengesi chimiro.
Kubvisa mutengo: kuongorora uku kuchashanda zvakanyanya kune zvimwe zvigadzirwa zvemari, senge mari yekudyara. Panguva iyo iwe yaunoda kugadzirisa zvigaro kuti unakidzwe nemari muako yekutarisa account. Muzviitiko izvi zvakati wandei, unenge usisina sarudzo kunze kwekuverenga zvinhu, mune ino mari midziyo inomiririrwa nemasheya pamusika wemasheya, inobviswa pazvikwereti zviripo panguva iyoyo. Mhedzisiro inobuda mukushanda uku hapana chimwe uye hapana chakaderera pane kukosha kwenzvimbo yacho.
Kukosha kwemusika: kuvimbika zvakanyanya
Ehezve, mutengo wemusika ndiwo unonyanya kutariswa muzvipo zveruzhinji zvekutengesa, zvinowanzozivikanwa seIPOs. Zvakanaka, mukati mechiitiko ichi, mutengo uyu muzvikamu zvemitengo yemusika wemasheya wakatemwa zvakanyanya ne for the kugovera uye kudiwa kunoyerera. Mune mamwe mazwi, ndiwo musika wezvemari iwo wega unotara mutengo wayo chaiwo nguva dzese. Sezvo zvese mashandiro mumisika yemari inotongwa mumakore achangopfuura.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa panguva dzino dzeichi chiitiko kuti mashandiro eruzhinji zvinopihwa zvekutengesa hapana kusahadzika kuitira kuti kukosha inokwidziridzwa mune kufarira kwevanogovana ivo pachavo. Ndokureva, kuti ivo vakanyorwa pakukwira, sezvakaitika mumakore achangopfuura nemamwe akanyanya kufanira IPOs. Hazvishamisi kuti kana chengetedzo yakanyorwa ikaenda kuruzhinji, zvinowanzoita zvakadaro nemhedzisiro. Izvi zvinokonzerwa nekuti mutengo wekambani unogadziriswa zvakawandisa, chimwe chinhu icho kune rimwe divi chinowanzo batsira zvido zvevashambadzi vadiki nepakati.
Inoda IPOs kunyorera?
Chekupedzisira, pane chakakodzerana nenyaya yemusoro wenyaya uye ndokunge kana zvichikwanisika kubvumirana nemasheya kuburikidza nemaitiro eruzhinji zvinopihwa zvekutengesa. Zvakanaka, zvese zvinoenderana nekuti chii chako kunyorera mamiriro. Kuti udzivise dambudziko risinganzwisisike mune izvi, iwe unenge usina imwe sarudzo kunze kwekuverenga zvese ruzivo rwunogadzirwa neIPO.
Kana zvirinani, tsvaga masevhisi eako stock market chipangamazano kuti akuudze zvekuita pane imwe neimwe yezviitiko umo kushanda kweakakosha hunhu kunoitika. Nekuti zvirokwazvo kwete mune ese mamiriro iwe unofanirwa kupa mhinduro imwechete. Kusvika padanho rekuti mamwe maIPO achange achinakidza kuenda kwavari, nepo kune vamwe zvakapesana, haufanire kuitisa kutora zvinzvimbo pasi pechinhu chipi zvacho.
Sezvaungave iwe wakamboona, iyi inyaya yakaoma kwazvo nekuti zvinopihwa neruzhinji zvinotengeswa zvechokwadi hazvisi zvakafanana basa, kure nazvo. Kana zvisiri, pane kudaro, zvinoenderana nemhando dzakasiyana uye dzimwe dzadzo dzakasiyana hunhu, sezvo iwe wakwanisa kuongorora muchinyorwa chino. Iko kumagumo kunongova iwe ndiwe unofanira kuita sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Chii chinonzi IPO?